ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: August 2012
ကိုယ့်အိမ်ကို ကိုယ် မီးရှို့တာ နဲ့ တူသတဲ့။
ဒါကြောင့် လူတွေကို မမုန်းနဲ့နော်။
ဟို လူမုန်း ဒီ လူမုန်းနဲ့
နာကြည်း မုန်းတီးခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ရင်
ဖြေ ဖျောက် ပစ်လိုက်ပါတော့
ရေးသားသူ juno at Thursday, August 30, 2012 No comments:
ကျွန်တော့ဆီကို မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်. . . သူ့ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲလာတဲ့ အကြောင်း လာပြောပြတာပါ. . . မာနသံလေးကလည်း သူ့စကားလုံးတိုင်းမှာ ပျော်ဝင်လို့ နေပါတယ်..
"သူနဲ့ လမ်းခွဲရလည်း ၀မ်းနည်းစရာ မဟုတ်ပါ ဘူး ဗျာ. . . အစားထိုးစရာ မိန်းမတွေ အများကြီးပါပဲ အစားထိုးလိုက် တာပေါ့. . . .ဘယ်ရမလဲ. . "
ဒါပေမယ့် ဗျာ. . .
"အစားထိုးတယ်ဆိုတာ လမ်းပေါ်က ချိုင့်ခွက် တစ်ခု ကို ရေဖြည့်ထားသလိုပါပဲ. .
အပေါ်ယံတော့ လမ်းက ချောလို့ပေါ့. နင်းမိရင် တော့. . ."
သူ့စကားကို အဆုံး မသတ်သေးပါဘူး. .
ငေးနေတဲ့ ညနေခင်းဟာ လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ အတိပြီးပါတယ်...
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, August 29, 2012 No comments:
ဝေသာလီ၌ ဘေးကြီးဆိုက်နေစဉ် အရှင်အာနန္ဒာ ရတနသုတ်ပရိတ် ရွတ်နေပုံ
ဝေသာလီပြည်၌ မိုးခေါင်သောကြောင့် ငတ်မွတ်ဘေးကြီးဆိုက်၍ လူအများ သေကြ၏. သူသေကောင်တွေ ၏ အနံ့ကြောင့် သားရဲ ဘီလူးတို့ မြို့တွင်းသို့ ၀င်လာသဖြင့် သာ၍ အသေများ၏.. . . ထိုဘေးကြီးကို ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းရှာ ကြံကြလေရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို ပင့်ဖို့ရာ သဘောတူသောကြောင့် ရာဇဂြိုလ်မှ သံဃာတော်များနှင့် တကွ ပင့်ကြလေသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ၏ လှေ ဖာင်တော်ကြီးဆိုက်ချိန်မှာပင် မိုးကြီးသည်းထန်စွာ ရွာသောကြောင့် လူသေ အလောင်းများ မျောပါ သွားသဖြင့် သန့်ရှင်းနေနှင့်လေပြီ. . မြို့တော်တံခါးပေါက်သို့ ရောက်သောအခေါ အရှင် အာနန္ဒာသည် ရတနသုတ်ပရိတ်တော်ကို သင်ယူ၍ လိစ္ဆ၀ီမင်းသား တို့ကိုခြံရံစေလျက် သပိတ်တော်မှ ရေကို ဖျုန်းကာ ဖျန်းကာ မြို့ရိုး ၃ ထပ် အကြား၌ လှည့်ပတ် ရွတ်ဆိုလေရာ မကောင်းဆိုးဝါး ဟူသမျှ ပြေးကြ၍ ရောဂါ အားလုံး ကင်းငြိမ်းရလေသည်။
VENERABLE ANANDA RECITING RATANA SUTTA PARITTA TO RELIEVE THE PEOPLE OF VESALI FROM ATTACKS OF FAMINE AND PESTILENCE
There was scarcity of rain at Vesali (modern Besah) and many people died from the effects of famine which attacked it. The offensive smell the corpses brought demons and ogres into the town and there were more deaths. To make matters worse,adisease very much like modern plague broke out, and there were still more deaths. The people discussed ways and means of relief from attacks of famine and disease. They eventually agreed to invite the Buddha for that purpose , and requested the Blessed one to come over from Rajagaha together with his retinue of monks. When the Blessed one arrived at Vesali in the royal barge there wasaheavy downpour of rain which washed away all the corpses and the town had become clean. On arrival at the city gate the Venearable Ananada learnt the Rantana Sutta Paritta and recited it by walking round the city in between its three walls, and sprinkling the holy water from his bowl now and again while going round the city with the Licchavi Princess accompanying him. Thus, all the evil spirits were driven away from the city which was rendered free from diseases.
ရေးသားသူ juno at Friday, August 24, 2012 No comments:
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, August 18, 20124comments:
"ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ " လို့အော်မြည်တတ်လို့ မယှက အမည်ရတဲ့ ငှက်ကလေးဟာ တောင်ပေါ်၊ တောင်အပြင် ချောက်အရပ်တွေ မှာ လှည့်လည်တယ် မှည့်နေတဲ့ ပိတ်ချင်းပင် ပေါ်တက်ကာ "ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ " လို့ အော်မြည်တယ်
အဲဒီငှက်ကလေး အဲဒီလိုအော်မြည်နေတုန်း ငှက်တွေ ရောက်လာကြတယ် ။ ပိတ်ချင်းသီးကို စားပြီး သွားကြတယ်.. . . အဲဒီငှက်ကလေးကတော့ စားနေတဲ့ အဲဒီငှက်တွေကို တားမြစ်ဖို့ရာ "ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ " လို့ အော်မြည်နေဆဲပါပဲ. . .
ုပဲ ၊ ဒီလူ့လောက မှာ တချို့လူဟာ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို အများကြီး စုဆောင်းတယ် . .ကိုယ့်အတွက်ရော ဆွေမျိုးတွေအတွက်ပါ သုံးထိုက်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ မသုံး၊ မပေးကမ်း။
အဲဒီလူဟာ အ၀တ် ၊ အစားအစာ၊ ပန်းနံသာ ဘာကိုမှ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မသုံးစွဲ၊ ဆွေမျိုးတွေကို မချီးမြှောက်၊ မထောက်ပံ့၊ မပေးကမ်း၊
အဲဒီလူဟာ "ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ " လို့ စောင့်ရှောက်ငာ အော်မြည်ရင်း မင်းတွေ၊ သူခိုးတွေ၊ အမွေခံသားဆိုး၊ သမီးဆိုး တွေက ပစ္စည်းဥစ္စတွေကို ယူသွားကြတယ်. . . . အဲဒီလူက တော့ "ငါ့ဟာ ငါ့ဟာ " လို့ အော်မြည် တမ်းနေဆဲပါပဲ။
ပညာရှိသူဟာ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို ရရှိပြီး ကိုယ့်ထံလာတဲ့ မရှိနွမ်းပါး တဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်း ချီးမြှေက်ထောက်ပံ့ တယ်. . .အဲဒီလူဟာ အဲဒီလို ထောက်ပံ့မှုကြောင့် ပရိသတ် အလယ်မှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတယ်. . . ချီးမွမ်းခံရတယ်. . နောက်ဘ၀ရောက်တော့ နတ်ပြည်မှာ ၀မ်းမြောက် ပျော်ရွှင်ရတယ်။
မယှက ငှက်ကလေးလိုလူတွေက လောကတစ်လွှားမှာ များပြားလှတယ်. . . . အခြားယောကျား(လင်ငယ်)နဲ့ ဖောက်ပြန်ပြီး ရထားတဲ့ သားလေးကို ကိုယ့်သားထင်ပြီး ငါ့သား င့ါသားလို့ ခေါ်ဝေါ်ကာ မြူနေတဲ့ လင်ကြီးဖြစ်သူကို အခြားနေရာမှ လှမ်းကြည့်နေတဲ့ မယားဖြစ်သူက ရယ်ပါသတဲ့. . . . သြော် သူ့သားမဟုတ်တာကို မသိရှာဘူး.. .သူ့သားလို့ ထင်နေရှာတယ်. . . .သနားစရာ ကောင်းလှပါဘိတော့ တယ်လို့ ဆိုသတဲ့. . မယှကငှက်လို လူတွေကိုလည်း ပစ္စည်း ဥစ္စာတွေက အဲဒီမယား ရယ်သလိုများ ရယ်နေကြလေရော့မလား. . . . ရယ်တတ်ရင် ရယ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်……
ရေးသားသူ juno at Wednesday, August 15, 20122comments:
ငယ်ရွယ် နုပျိုနေစဉ် အခါက ကြိုးစားပြီး ဥစ္စာကို မစုဆောင်း ၊ မရရှိခဲ့လို့ အသက်ကြီးလာတဲ့ အခါ ပူပန် ၀မ်းနည်းရတယ်. . . သူတစ်ပါး တွေ ချမ်းသာနေကြတာကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်မှာ ဆင်းဆင်းရဲနဲ့ အသက်မွေးရတဲ့အခါ "ရှေးတုန်းက ငါဟာ ဥစ္စာကို မရှာခဲ့ရလေခြင်း" လို့ တွေးကာ ပူပင်ရတယ်။
ဒါကြောင့် အသက်ကြီးတဲ့အခါ ချမ်းချမ်းသာသာ အသက်မွေး လိုသူတွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉ် အချိန်မှာပဲ တရားနဲ့ အညီဖြစ်တဲ့ လယ်ထွန်ခြင်းစတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကာ ဥစ္စာကို ရှာဖွေထားကြရပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဉ်အခါ ဆရာတွေထံ ချည်းကပ်ပြီး ငါဟာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆင်အတတ် စတဲ့ အတတ်ပညာတစ်ခုခု ကို မသင်ခဲ့ရလေခြင်းလို့ တွေးကာ ပူပန်ရတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့အခါ အတတ်ပညာမရှိသူမှာ အသက်မွေးရတာ ဆင်းရဲတယ်။ အသက်ကြီးမှ အတတ်ပညာကို သင်ယူဖို့ မတတ်နိုင် ဒါကြောင့် အသက်ကြီးတဲ့အခါ ချမ်းချမ်းသာသာ အသက်မွေးလိုသူတွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉ် အချိန်မှာပဲ အတတ်ပညာကို သင်ယူထားကြရပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဉ်အခါမှာ ပညာလည်း ရှာရပါတယ်။ ဥစ္စာလည်း ရှာရပါတယ်။ အသက်ကြီးပြီး အိုမင်းလာပြီဆိုရင် ပညာရှာဖို့၊ ဥစ္စာရှာဖို့ အလွယ်ကူလှတော့ပါ။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ချောင်ချောင်နေ၊ ပေါ့ပေါ့နေသူတွေဟာ ကြီးလာတဲ့အခါ အဘိုးကြီး ၊ အဘွားကြီးဘ၀မှ အကျပ်တွေ့ကြရပါတယ်။ ငယ်ချောင် ၊ ကြီး ကျပ် ဖြစ်ကြရပါတယ်။
ကြီးတဲ့အခါ ချောင်ချောင်လည်လည် ဖြစ်ချင်ရင် ငယ်စဉ်ကပဲ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ပညာကိုလည်း ရှာရပါတယ်။ ဥစ္စာကိုလည်း ရှာရပါတယ်။
ပုရွတ်ဆိတ်လေးတွေဟာ အင်မတန်မှ ၀ီရိယကောင်းကြတယ်။ အစာကို ကြိုတင် စုဆောင်းရှာဖွေတဲ့ နေရာမှာ စံနမူနာ ယူလောက်တဲ့ သတ္တ၀ါလေးတွေ ဟာ မိုးအခါ မရောက်ခင် အစာကို ကြိုတင်ရှာဖွေ စုဆောင်းထားကြသလို လူတွေဟာလည်း မအိုခင် ကပဲ ပညာကို လည်း စုဆောင်းရပါတယ်။ ဥစ္စာကိုလည်း စုဆောင်းရပါတယ်။ မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့ အခါမှာ စားသောက် နိုင်ဖို့ရာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပဲ အိုစာ မင်းစာ ရှာထားကြရပါတယ်။
ရေးသားသူ juno at Saturday, August 04, 20123comments: